I-FAQ -I-Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
Ukuprintwa kunye nokudaya
Ushicilelo kunye noPhawu
Ukudaya iDenim Pulp kunye nokuhlamba
Ikhethelwe ukudaya ngedatshi ngomatshini omde
Iindaba kunye neendlela
Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yokurhweba?
Ihlala phi ifektri yakho? Ndingandwendwela njani?
Indawo yethu yomzi-mveliso kwisiXeko saseDongguan, kufutshane naseShenzhen, yamkelekile ukusityelela!
Siyakuvuyela ukunikezela isampulu yakho.
1. Zingaphezu kwe-23 ii-ketane zokuphendula kunye nenkqubo yokucoca amanzi amdaka, zonke iimveliso zithobela imigangatho yokusingqongileyo.
2. Iindawo ezigqityiweyo zokwenza imveliso.
3. Ukuba namandla kweR & D kunye neelebhu zokuhlola.
4. OEM yamkelekile.
Ukusombulula njani uphawu lwamanzi emva kokuhlamba kwelitye?
ukuba ukuhlanjwa kwesiqhelo kwenziwe kakuhle akuyi kubonakala njengophawu lwamanzi. Le ngxaki kufuneka isonjululwe ngexesha lokufuna.
Ngaba inkqubo eqhelekileyo yokuhlamba kufuneka yongeze iarhente yemichiza?
ukuba awongezi i-arhente yemichiza kwinkqubo yokwenza oko, ufuna ukusebenzisa ubushushu okanye ixesha lokuhlamba ukwenza ukuthanda. Kodwa ukuba ufuna ukufezekisa isiphumo esifunekayo, okanye ukongeza iiarhente zamachiza ezifana nokufuna amanzi, isiphumo siya kuba ngcono.
Umtya we-jean utshintsha umbala emva kokuhlanjwa kwe-encyme ye-classics, sisithini isisombululo?
Ufuna ukuwubona ngokucacileyo umbala oguqulwe lilaphu kuqala nokuba libonakala ngudayi. Ukuba akukhange kubenokwenzeka, ukuba le nto Umbala awukwazi ukufudumeza, ngoko umbala watshintshwa. Ukuba ufuna ukusombulula le nto, kuya kufuneka ulungise umbala welaphu ngaphambi kokuhlamba.
Ungawunciphisa njani umgangatho we-shrinkage ye-jean?
Izinga le-shrinkage yee jean kunzima kakhulu ukulilawula, ihlala iqala ukwenza ubungakanani obuhlukeneyo beebhulukhwe, kwaye ke uzame umyinge we-shrinkage ngaphambi kwenani elikhulu lokuthunga. Kodwa nikela ingqalelo kwilaphu le-jeans elisetyenzisiweyo, umgangatho othile we-shrinkage yendwangu awuzinzanga, oku kufuneka kuvavanywe kaninzi. Kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kwiqondo lokushisa elisetyenziselwa ukuhlamba njengoko umahluko kumaqondo obushushu nawo unokuchaphazela umda we-shrinkage. Kwangelo xesha, inani leebhulukwe zamanzi liya kuchaphazela, eyona ndlela yokuhlamba ngokukhawuleza inani leempahla ezilishumi elinambini, jonga ukuba ngaba umgangatho we-shrinkage unzulu, ukuba ewe, nceda wazise umzi-mveliso wokuhlamba ukulungisa ngokukhawuleza.
Ndingakwazi ukutshintsha ubushushu bamanzi ixesha lokuhlamba kwetyala?
Ewe kulungile ukusebenzisa i-Ferment kuhlamba, kuba i-Ferment iyakwazi ukunyibilika emanzini, ukuba angakanani amanzi anokuchaphazela ukuqina kwe-Ferment, ukuba nje ugcina uxinzelelo oluthile, yongeza i-arhente yeekhemikhali kwakhona, okanye usebenzise ixesha elide ukugaya iarp yejasi evaliweyo, umda we-latitude. Oku kunokwenza inkqubo yokuhlamba ihlale ixesha elide okanye emfutshane.
Ayifani nombala we-orighinal emva kokuhlamba iJeans, indlela yokuphucula le ngxaki?
Ukuba umbala umnyama mnyama emva kokuhlamba, unokuhlamba ixesha elininzi. Ukuba ilula kancinane, unokuyidaya kwakhona.
Ungayisombulula njani le ngxaki ukuba kukho imibala eyahlukileyo kwiibatch zeebhendi ezifanayo?
Ngenxa yelaphu ine-chroma eyahlukileyo, kuya kufuneka uqhubeke nokuhlula umbala ngaphambi kokuba unqwenele, ukhanyise ukukhanya ngaphezulu kwexesha elinye emva kokuba unqwenela, emva koko wahlukanisa umbala, Ngale ndlela, ungabagcina umbala omnye kwi-batch yeempahla. Ukongeza, ukuba ufumene ibhetri yokuqala yeempahla inombala owahlukileyo, kuya kufuneka wazise umzi-mveliso wokuhlamba ukwahlula umbala ngexesha lokuqala.
I-elastic jeans emva kokuhlamba iya kuchaphazela i-elastic, njani ukuphucula?
Kwidyasi eyoluliweyo, ukuba uwenza mhlophe umbala ukuba ukhanye, ungabi mhlophe mhlophe kube kanye, kwaye amaqondo obushushu akufuneki abe phezulu kakhulu, ubuninzi akufuneki bube ngaphezu kwe-60℃. Into ebalulekileyo kukuba uyiyeke ibe mhlophe amaxesha amabini ngokwahlukeneyo ukuze ihlale i-elastic.
Kutheni i-jean isanzima kakhulu emva kokuhlamba?
Eyokuqala mhlawumbi yingxaki yelaphu, okwesibini kukuba ixesha lokuhlamba alanele, kuya kufuneka wandise ixesha lokuhlamba ukuba ufuna ukuba isiphumo sithambe ngakumbi, eyesi-3 yeyiphi indlela yokuhlamba esiya kuyisebenzisa, ukuba sihlamba ngelitye okanye ngerayisi, Zombini isiphumo kunye nenani zihlukile. Ukuba ilitye lihlanjwa nge-enzyme, ukulandelelana kwelitye okanye i-enzyme, okanye ukuba ilitye lihlanjwa nge-enzyme kwi-VAT, isiphumo siya kwahluka. Ungatshintsha njani kwinqanaba kwinqanaba lengqondo yakho, kuya kufuneka uzame ngokungapheliyo kwaye ungeze ngokwakho ukucinga, oku kunokwenza iziphumo ezifanelekileyo.
Ngaba ukunqongophala kwento enegwele kunxibelelene nelaphu layo okanye izixhobo ezingafunekiyo?
Ilaphu okanye izinto eziluhlaza sisizathu sokuqala, isizathu sesibini kukuba inkqubo yokwenza ayenziwa kakuhle, ukusilela kwexesha kuya kubonakala kusiba nzima.
Enkosi ngomdla wakho nokukonwabela ukufunda kwakho. Ubunjani bemichiza esemgangathweni kunye neenkonzo ziya kubonelelwa, zamkele ngokunyaniseka ukubonisana neengcebiso zakho!
Iimveliso ezishushu - Imephu - I-AMP Iselula
I-Lipu Industrial Estate, i-Huangjingkeng Village, i-Huangjiang Idolophu, Isixeko sase-Dongguan, kwiPhondo laseGuangdong, China, 523760